‘पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा चुनौती बढेको छ’ – Sajha Bisaunee
‘पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा चुनौती बढेको छ’
डा. डम्बर खड्का (निर्देशक, कर्णाली प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत)
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएको चार महिनासम्म कर्णाली प्रदेशमा भने संक्रमित फेला परेका थिएनन् । अन्य प्रदेशमा धमाधम संक्रमित फेला परिरहँदा कर्णालीलाई कोरोनामुक्त घोषणा गर्ने चर्चा चल्दै थियो । तर जब गत जेठ ५ गते दैलेखमा पहिलो संक्रमित फेला परे, त्यसयता संक्रमणको गति निकै तीव्र बन्यो । पछिल्लो तीन महिनामै संक्रमितको संख्या तीन हजार पुग्न थालिसकेको छ । एकातर्फ संक्रमित बढ्दैछन् भने अर्कोतर्फ समुदायस्तरमा पुगिसकेका कारण थप जोखिम निम्तिएको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णालीमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, प्रतिकार्यमा भइरहेका काम, आगामी योजना, स्वास्थ्य संरचना र जनशक्तिको अवस्था लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डा. डम्बर खड्कासँग गरेको कुराकानी:
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको चार महिनासम्म पनि कर्णाली ‘ग्रिन जोन’मा थियो । ढिलो संक्रमण देखिएको प्रदेशमा तीन महिनामै करिब तीन हजार संक्रमित फेला परिसकेका छन् । संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको छ । यस्तो कसरी भयो ?
कर्णाली प्रदेशबाट कामको शिलशिलामा भारत जानेहरूको संख्या अत्याधिक छ । भारतमा संक्रमण फैलिन थालेपछि र नेपालमा समेत सरकारले लकडाउन गर्ने भएपछि त्यहाँबाट कामदारहरू गाउँ फर्कन थाले । अर्को कुरा अधिकांश नागरिक लुकीछिपी नाकाबाट प्रवेश गरे । जो व्यक्तिहरू वैधानिक रूपमा नाकाबाटै आरटी–पीसीआर गरी आए उनीहरू क्वारेन्टाइन बसेर परीक्षणपछि मात्रै समुदायमा गए । जो व्यक्तिहरू लुकीछिपी भित्रिएका थिए । उनीहरू परीक्षण नगरीकनै समुदायमा गए जसले गर्दा समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिएको हो । नागरिक स्वयम् अनुशासित नहुँदा संक्रमण समुदायमा फैलियो ।
 अब कर्णाली ‘ग्रिन जोन’ रहेन । समुदायस्तरमा संक्रमण पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य संरचनाहरूको अवस्था कस्तो छ ?
प्रदेशका चारवटा अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल यसअघिनै तोकिसकेको अवस्था हो । जसमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चौरजहारी अस्पताल रुकुम–पश्चिम र दैलेख अस्पताल । अन्य अस्पतालहरूमा समेत संरचना होला । तर प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको हकमा तीन सय शैयाको बेड भएकोले काम गर्न सहज छ ।
अर्को कुरा कोरोना प्रतिकार्यका लागि हामीसँग एक सय बेड क्षमताको आइसोलेसन भए पनि दुई सय जनासम्म राख्न मिल्नेगरी व्यवस्थापन गरेका छौं । अस्पतालमा भएका आठ वटा भेन्टिलेटरमध्ये हाल दुईवटा भेन्टिलेटरलाई कोरोना प्रतिकार्यका लागि प्रयोग गरेका छौं । यद्यपि संक्रमण फैलिएको अवस्था र जटिल खालको बिरामी आएको अवस्थामा बाँकी ६ वटा भेन्टिलेटर समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । संरचनाको अवस्था समग्रमा ठीकै भन्नुपर्छ । असार मसान्तसम्ममा जे संरचना थपिएका थिए सम्भवतः जिल्लाहरूमा समेत तिनै संरचना छन् ।
कोरोना प्रतिकार्यका लागि जनशक्ति पर्याप्त छन् ? पहिलेकै जनशक्तिबाट काम चलाउनु भएको छ कि, थप भएका छन् ?
हामीसँग कोरोना भाइरस प्रतिकार्यका लागि भनेर छुट्टै जनशक्ति पठाइएको छैन । पूरानै जनशक्तिहरूलाई प्रयोग गरी कोरोना प्रतिकार्यमा व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीसँग करिब ९० को हाराहारीमा नर्सिङ्ग स्टाफ र ५५ जना जति डाक्टरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूबाटै काम चलाएका छौँ । प्रदेश सरकारले नाकाहरूमा रहेका हेल्थ डेस्क र जिल्लाहरूमा केही नर्सहरूलाई खटाएको छ । तर प्रदेश अस्पतालमा भने कोरोना प्रतिकार्यका लागि छुट्टै स्वास्थ्यकर्मी भने खटाइएको छैन । जसले गर्दा हामीहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो ।
एउटै स्वास्थ्यकर्मी दुवैतिर खटिनुपरेको अवस्था छ । यदि थप जनशक्ति भएको भए पटक–पटक स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित हुँदा अस्पतालको सेवा बन्द गर्न पर्दैनथ्यो । हालसम्म हाम्रा ४१ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई संक्रमण भइसकेको छ । जनशक्ति अभावमा पटक–पटक अस्पताल बन्द पनि गर्नुपरेको अवस्था छ । जनशक्ति अभावमा कोरोनासँग लड्नु हाम्रो लागि चुनौतिको विषय हो ।
समुदाय स्तरमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसबाट नागरिकहरू कसरी सुरक्षित हुने ?
सबैभन्दा पहिले त नागरिकहरू नै सचेत हुनु जरुरी छ । भौतिक दूरी नै कोरोनासँग बच्ने अचुक औषधि हो । अत्यावश्यक बाहेक छिमेकीको घरमा समेत नजानुहोस् । बजार तथा कार्यालयहरूमा जाँदा समेत दूरी कामय गरी बस्नुहोस् । सकेसम्म अस्पतालमा समेत फोनबाटै सेवा लिने बानी बसाल्नुहोस् । नागरिकहरू सचेत नभएसम्म स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् । नागरिक अनुशासनमा बस्न जरुरी छ । सरसफाइमा अत्याधिक ध्यान पु¥याउनुप¥र्यो ।
पटक–पटक हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने र भिडभाड नगर्नाले समुदायस्तरमा कोरोना फैलिँदैन । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा नागरिकहरू डराउँथे । कानुन कमजोर र कार्यान्वयन समेत कम भएकोले नागरिकहरूको अटेरी पनि बढेको छ । यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको विधि र बनाएको योजना ठीक छ ?
प्रदेश सरकारले समेत कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि कोशिस गरेकै छ । अस्पतालमा आवश्यक परेको सामग्री प्राप्त भएकै छ । तर जनशक्ति भने व्यवस्था गर्न नसक्दा हामीहरूलाई काम गर्न समस्या भएको हो । तर आर्थिक रूपमा भने प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको भन्न मिल्दैन ।
यदि कर्णालीमा अहिलेकोभन्दा भयावह स्थिति आयो भने त्यसका लागि आवश्यक तयारी के गर्नुभएको छ ?
अब त्यस्तो अवस्था आयो भने त विश्वमा अपनाएको विधि नै अपनाउनुपर्छ । लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना गर्ने । लक्षण नदेखिएकाहरूलाई घरमा होम आइसोलेसनमा राख्ने । तर निरन्तर डाक्टरहरूको निगरानीमा राख्ने ।
कोरोना भाइरसलाई सामाजिक अपराधको रूपमा लिने गरिएको छ । त्यो सबैभन्दा गलत कार्य हो । आखिर हिजोदेखि हामी सबैलाई ज्वरो, रुघाखोकी त लागेकै हो । तर कोरोना मात्रै होइन सबै बिरामीसँग दूरी बनाउँदा दुवैलाई फाइदा हुन्छ । दूरी कायम गर्ने नाममा समाजबाटै बहिस्कार र तिरस्कार भने गर्नुहुँदैन । घरको एउटा कोठामा बिरामीलाई राख्न सकिन्छ । निश्चित अवधि (१४ दिन)सम्म ‘होम आइसोलेसन’मा बस्यो भने समुदायमा संक्रमण फैलिन पाउँदैन ।
कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा कस्तो छ ? परीक्षण बढाउनको लागि सामग्री र जनशक्तिको अवस्था के छ ?
कोरोना परीक्षण त भइरहेकै छ । तर आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरूले समेत परिक्षण गरिरहेका छन् । परिक्षणको दुरूपयोग पछिल्लो समयमा बढेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । संक्रमित देश वा क्षेत्रबाट आएका, कन्ट्याक्ट टे«सिङमा परेका र लक्षण देखिएकाहरूलाई परीक्षण गर्दा ठीकै हुन्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । सामग्रीको कुरा गर्दा हामीसँग थप कोरोना परीक्षणको लागि मेसिन समेत आइसकेको छ । तर कोरोना प्रतिकार्यका लागि जनशक्ति नहुनु सबैभन्दा ठूलो चुनौतिकै विषय बनेको छ । यद्यपि भइरहेकै जनशक्तिहरू प्रयोग
एक पटक कोरोना संक्रमण भइसकेकाहरूलाई पछिसम्म श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्छ भन्ने हल्ला छ नि ?
दीर्घ रोगीहरूलाई यसले असर गर्ने हो । तर अन्य रोग नलागेकाहरूलाई यसले छुट्टै समस्या निम्त्याउँदैन । हल्लाको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि आफू र आफ्नो परिवारलाई कसरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
अन्तमा, आम नागरिकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
जोखिमको समय छ । सबै सचेत हुन जरुरी छ । यसका लागि भौतिक दूरी कायम गर्न सकियो भने कोरोनाको संक्रमण फैलिँदैन । नियममा बस्न सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्कनुहोस् । अस्पतालमा समेत अनावश्यक व्यक्तिहरू नआइदिनुहोस् । तपाईंहरू एक जनाले गर्दा संक्रमण धेरै ठाउँमा फैलन सक्छ । त्यसैले भिडभाड, सभा, जात्रा भन्दा पनि भौतिक दूरीलाई अवलम्बन गर्नुहोस्, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोस् । यसले कोरोना मात्रै होइन अन्य थुप्रै रोगहरूबाट बचाउँछ ।
प्रकाशित मितिः २५ भाद्र २०७७, बिहीबार ०६:०३